Qalabka Saliida, Mashiinka Mashiinka Saliida, Saliida Saliida - Huipin
HP120 Awoodda Yar ee Press Cold Press
Macaamiisha iyo tayada ayaa had iyo jeer ugu horreeya
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah. Hayso 40 sano oo iib ah iyo khibrad farsamo
Hebei Huipin Makiinado Co., Ltd. waa ganacsi ballaaran oo hadhuudh iyo saliid qalab ku takhasusay cilmi baarista sayniska, naqshadeynta, wax soo saarka, iibka iyo rakibaadda mashruuca. Shirkadaha hoos yimaada waxaa ka mid ah Dingzhou Yongsheng Grain iyo Saliida Mashiinka Co., Ltd. iyo Wanli Midho iyo Saliid Makiinado Co., Ltd.
Aqoon Isweydaarsi Ku Saabsan Saliidda Qudaarta
Qaybta sifaynta saliida cayriin ee ahama
Khadka Sifeynta Saliida 100TPD ee Saliida Jeermiska
Khadka Nadiifinta Nadiifinta Birta ah ee Birta ah
20 Khadka Khadka Saxaafadda La Kufsaday
120TPD Khadka Tooska Qorraxda
200TPD Khadka Prepress Kufsiga ah
500TPD Khadka Tooska Canola
Aqoon-isweydaarsiga Tababaridda Saliidda Lajirka '150TPD'
70 Tan oo Khadka Saxaafadda iniin khardal ah
Khadka Shaandhaynta Saliida 30TPD
100 Tan oo Qarni Germ-ka Wax-Soosaarka Hore-Raadinta
200 Tan oo ah Mashruuca Cadaadiska Jermiska Maskaxda
Aqoon-isweydaarsiga Saxaafadda ee 250TPD
Aqoon isweydaarsiga 500TPD Saliidda Saliidda la Siiyo
Leaching Saliidda Qudaarta
Saliida Ceyriin Warshad sifeyn joogto ah buuxda
Qalabkayaga soo saarida saliida cuntada waxaa lagu iibiyaa gudaha iyo dibada ，
suuqeena ugu weyni waa Aasiyada Dhexe, Koonfur-bari Aasiya, Afrika, Koonfurta Ameerika iyo wixii la mid ah.
Macaamiil badan ayaa weydiin doona inta jeer ee la beddelo qalabka qalabka wax lagu duubo markii ay iibsadaan? Waxay u muuqataa in dareenka isticmaalaha dhibaatadan uu aad u sarreeyo. Maanta, o ...
Isticmaalka saliida 1. Cun. Waa mid ka mid ah saddexda nafaqo ee ugu waaweyn (karbohaydrayt, borotiin iyo saliid) oo jidhka bini'aadamku aanu u baahnayn inuu ka maqnaado. Isticmaalku waa mid ka mid ah calaamadaha heerka nolosha. T ...
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo helo saliidda cuntada. Tusaale ahaan habka saxaafadda fur fur, habka saxaafadda hidda, habka soo saarista dareeraha iwm. Mashiinka saxaafadda fur jirka ...
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Qarxinta Centrifuge, Mashiinka Sameeya Saliida, Ku Marooji Gooryaanka Mashiinka Madbacadda Saliidda, Saliida Ugu Dambeysa, Mashiinka Saliida Cuntada Lagu Sifeeyay, Saliida Olive,